NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် SRT ၏နည်းပညာကို Preview နှင့် IBC2019 မှာထုတ်လုပ်မှု Workflows အတွက် Haivision SRT Hub တင်ပြ avid
Home » သတင်း » IBC2019 မှာထုတ်လုပ်မှု Workflows အတွက် SRT ၏နည်းပညာကို Preview နှင့် Haivision SRT Hub တင်ပြ avid
IBC2019 မှာထုတ်လုပ်မှု Workflows အတွက် SRT ၏နည်းပညာကို Preview နှင့် Haivision SRT Hub တင်ပြ avid
Haivision နှင့် Microsoft နှင့်အတူပူးပေါင်း, လွန်စွာလိုလားသော အလွယ်တကူ cloud-based ထုတ်လုပ်မှု Workflows များအတွက် SRT Hub ကနေသုံးစွဲဖို့သတင်းနှင့်အားကစားထုတ်လွှင့်အားဖွင့်ခြင်းဖြင့်အသစ်သောမြေပြင်ချိုး
လွန်စွာလိုလားသော, Haivision နှင့် Microsoft On-Prem preview ဖို့နဲ့ cloud-based Workflows သုံးပြီး လွန်စွာလိုလားသော'' s ကို FastServe® | IBC2019 မှာ stream
SRT နှင့် Haivision SRT Hub စျေးကြီးခြင်းမရှိဘဲဘယ်နေရာမှာမဆိုမှ ပို. ပုံပြင်များကိုဖုံးလွှမ်းရန်သတင်းနှင့်အားကစားထုတ်လွှင့် enable ဂြိုဟ်တု လင့်များသို့မဟုတ်ဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူး
SRT ကြားခံသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲစတူဒီယိုဖို့ဒါမှမဟုတ်မိုဃ်းတိမ်မှလယ်ပြင်ကနေလုံလုံခြုံခြုံ, အလွန်နိမ့်အောင်းနေချိန်ဆက်သွယ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေး
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Azure စွမ်းအားဖြင့် Haivision SRT Hub, မှတဆင့်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာအလွယ်တကူမိုဃ်းတိမ်မှတဆင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထုတ်လွှင့်နိုင်ပါသည်
ဘာလင်တန်, Mass ။ , - လွန်စွာလိုလားသော® (Nasdaq: avid) ယနေ့အဘို့အဘက်ပေါင်းစုံထောက်ခံမှုထုတ်ပြန်ကြေညာ SRT protocol ကို, သတင်းနှင့်အားကစားထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ပွင့်လင်းအင်တာနက်ကိုကျော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ပေး open-source ကိုဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပရိုတိုကော (ယုံကြည်စိတ်ချရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Secure) ။ လွန်စွာလိုလားသော ဒါ့အပြင်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, High-quality နဲ့သို့လုံခြုံပေးပို့များအတွက် IP ကိုကျော် Microsoft က Azure ကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီး routing အသိဉာဏ် live- နှင့်ဖိုင်-based မိုဃ်းတိမ်ကိုမီဒီယာဖွပေးသော Haivision SRT Hub နှင့်အတူသစ်ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ လွန်စွာလိုလားသော မိုဃ်းတိမ်ကိုနှင့် On-ရဝုဏ်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ Workflows ။
"အိုင်ပီမိုဘိုင်းအကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်စားသုံးမှုမှတံခါးကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဖန်တီးသူနှင့်စားသုံးသူနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအရညျအသှေးအာမခံလေးနက်, ဖြစ်ပွားနေသောစိန်ခေါ်မှုခဲ့," Ray Thompson က, ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်မှာဒါရိုက်တာကပြောပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော။ "SRT နှင့် Haivision SRT Hub ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်, လွန်စွာလိုလားသော ဘယ်နေရာမှာမဆို MediaCentral သို့ထံမှသတင်း, အားကစားနှင့်တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာရဖို့စွမ်းရည်အပေါ်မကယ်မလွှတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်® နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာလမ်းကြောင်းများနှင့်ထုတ်လွှင့်ဖို့ကိုထုတ်။ "
ကတီထွင် Haivision, SRT Hub စတူဒီယိုသို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်မှလယ်ပြင်ကနေလုံလုံခြုံခြုံ, အလွန်နိမ့်အောင်းနေချိန်အရည်အသွေးမြင့် live- သို့မဟုတ်ဖိုင်-based လမ်းကြောင်းပေးသည်။ လွန်စွာလိုလားသော, Haivision နှင့် Microsoft On-Prem အစမ်းကြည့်နှင့်သြဇာ Haivision SRT Hub cloud-based Workflows မည်ဖြစ်ပြီး လွန်စွာလိုလားသော'' s ကို FastServe | အဘိုးထိုက်သောဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူးဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲဘယ်နေရာမှာမဆိုကနေ IP ကို-based SRT စီးသယ်ဆောင်ရန်နှင့်သုံးစွဲဖို့ stream သို့မဟုတ် ဂြိုဟ်တု လင့်များ။
"သတင်းနှင့်အားကစားထုတ်လွှင့်တိုးကြိမ်ဖြစ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးခဲနှင့်အတူ, ဘယ်နေရာမှာမဆိုမှ ပို. သတင်းများ, ဖြစ်ရပ်များနှင့်အားကစားကိုဖုံးလွှမ်းရန်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ IP ကို-based အလှူငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြတယ်" ဟုမာမွတ်အယ်လ် Daccak, Haivision မှာ CTO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖနှင့်အတူ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းနှင့် လွန်စွာလိုလားသော SRT Hub သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆိုပါ Azure ကျောရိုးတစ်လျှောက်နှင့်တစ်ဦးသို့တောမှအကြောင်းအရာကိုရယူဘို့ချောမွေ့စွာ Workflows သို့အတူတကွထုတ်လွှင့်ဂေဟစနစ်မိတ်ဖက်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပျေါလှငျ လွန်စွာလိုလားသော သတင်းသို့မဟုတ်အားကစားဝုဏ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်၌တပ်ဖြန့်ကြောင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာ။ "
အတူ "ဒီနည်းပညာကို preview ကို လွန်စွာလိုလားသော နှင့် Haivision မိုဃ်းတိမ်၌ထုတ်လုပ်မှု furthers နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာအဆုံးသတ်-to-end မှမိုဃ်းတိမ်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, သတင်း, အားကစားနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ် Workflows အမျိုးမျိုးဖွင့်စက်မှုလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားရှေ့ဆက်အခြားခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် "ဟု Sudheer Sirivara, Azure မီဒီယာမှာအဘို့အမှ General Manager ကပြောပါတယ် မိုက်ကရိုဆော့ဖကော်ပိုရေးရှင်း "လွန်စွာလိုလားသောMicrosoft ကများနှင့် Haivision တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလုံခြုံတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုမိုဃ်းတိမ်သို့အပ်ရလွယ်ကူအောင်, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏အရှိန်အဟုန်အရှိန်မြှင့်နေကြသည် လွန်စွာလိုလားသောသတင်းနှင့်အားကစားထုတ်လုပ်မှု -powered နှင့် Azure ကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးဖြန့်ဝေ။ "
လွန်စွာလိုလားသော ယင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် SRT မဟာမိတ်အဖွဲ့, စဉ်ဆက်မပြတ် Open-source ကို SRT တိုးတက်စေခြင်းဖြင့်အနိမ့်အောင်းနေချိန်အင်တာနက်ကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့် developer များ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသိုင်းအဝိုင်း။
လွန်စွာလိုလားသော SRT ၏အကွာအဝေးကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် MediaCentral® နှင့် FastServe® IBC2019 (7.B55 ရပ်), စက်တင်ဘာလ 13-17 မှာ applications များ။
လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SJGolden - လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-09-11
ယခင်: IBC2019 မှာဗီဒီယိုနှင့်အသံအကြောင်းအရာဖန်တီးရှင်များအတွက် avid စျေး Reimagined ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ Post လုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions
နောက်တစ်ခု: avid MediaCentral | ထုတ်ဝေသူလူမှုမီဒီယာအပေါ်အကြောင်းအရာငွေရအောင်လုပ်ပါရန်မီဒီယာကုမ္ပဏီများအာဏာ